Kedu ihe nrite kachasị ewu ewu maka onyinye gị na-akwalite? | Martech Zone
Kedu ihe nrite kachasị ewu ewu maka onyinye gị na-akwalite?
Thursday, May 5, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Anyị na-achọ ịhazi ụfọdụ nkwalite ruo nwa oge ugbu a, ma mgbe nhọrọ na ngwaọrụ bara ụba, ọ tụrụ m n'anya na enweghị ọtụtụ ndebiri kuki na-apụ ebe ahụ nwere ndekọ ndekọ egosipụtara. Nyocha a si Mgbapụ na-enyere anyị aka ime atụmatụ n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ ezie!
Mgbapụ weputara nsonaazụ sitere na Nnyocha Nlele Digital Promotion ha nke na-enwu banyere ọrụ nke ihe nrite na ịtụgharị ndị ọbịa bịara na nkwalite dị ka asọmpi, asọmpi foto, asọmpi ma ọ bụ asọmpi efu, yana ụdị ihe nrite ndị kachasị mma n'ịzụ ndị ahịa. ikere na itinye aka.
Ihe nsonaazụ ndị a gosipụtara bụ mkpa ọ dị iche echiche 'karịa akara ahụ' mgbe ị na-ahọrọ ihe nrite. Carles Bonfill, onye nchoputa na onye isi nke Easypromos
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agba ọsọ iji nye ngwa ahịa ahịa ma ọ bụ akụrụngwa kachasị ọhụrụ, nsonaazụ nyocha ahụ na-egosi na nke a anaghị abụkarị nzọ dị mma. mma bụ ihe dị oke mkpa na-ekpebi ịkwọ ụgbọala na ntinye aka na dijitalụ, nke pụtara na ọ gaghị esiri ike inweta site na onye nkwalite ma ọ bụ jiri ya, ebe ọnụ nke onyinye họọrọ dị ala. Naanị pasent asaa nke ndị ahịa kwuru na coupon ga-arata ha isonye na nkwalite dijitalụ.
Ihe Nchoputa di na Survey
Nrite ihe bara uru - Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, 48% nke ndị na-azụ ahịa kwuru na ihe nrite bụ ihe kachasị mkpa na nsonye; na 45% na-ekwu na ọ bụ isi na-ekpebi ihe
Dị ndị ahụ adịghị mkpa - 82% nke ndị zaghachiri kwuru na inwe ihe nrite ahụ dị mkpa karịa akara nke ihe nrite ahụ, ebe naanị 18% na-ekwu na akara ga-eme ka ndị mmadụ sonyere
Nkọkọrịta ahụmahụ na-emeri - 25% kwuru na ha ga-enwe ike itinye aka na nkwalite nke na-enye onyinye ndị nwere ike ịkekọrịta ya na ndị ọzọ, na 29% nke ndị zaghachirinụ na-ekwu na ihe nrite ha masịrị ha bụ tiketi na ahụmịhe dịka njem ma ọ bụ nri abalị.
Ngwaọrụ teknụzụ na ihe ndị ọzọ "naanị maka m ihe nrite" bụkwa ndị ama ama - Ngwa ngwa teknụzụ dịkwa elu na ndepụta ahụ na 17% nke ndị na-azụ ahịa na-edepụta ha dị ka ndị kachasị asọpụrụ, yana onyinye ndị ọzọ dị ka ahụike na ịma mma na-adọrọ adọrọ 11% nke ndị zaghachiri iji sonye na nkwalite.
Mgbapụ bụ onye ndu na nkwalite mgbasa ozi mmekọrịta na-enye ọrụ onwe ya, ikpo okwu dị mfe iji mepụta ma jikwaa mkpọsa dijitalụ na-enweghị nsogbu gafee netwọkụ mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla. Amalitere na 2010, Easypromos emeela mkpọsa dijitalụ na-akwado asọmpi, asọmpi, nyocha, nyocha, na ọtụtụ site na ngwọta dị mfe, nke a na-ahụkarị nke nwere ike ịkekọrịta maka nkwalite karịrị 250,000 n'ụwa niile. Ndị ahịa na-agafe mba 50, na nkwalite na-aga n'asụsụ 24.
Ngosipụta: Anyị na-eji nke anyị njikọ mmekọ na post a.
Tags: nkwalite ndị ahịamfepromosonyinye ndị a ma amaonyinye maka nkwaliteonyinye onyinyennyocha nkwadon'ọkwá
Etu esi ahapụta ụgbọ ibu azụmahịa gị ịhapụ Mgbasa Ozi Email